Best 24 Tapa-Design Tattoo Ideas ho an'ny lehilahy sy vehivavy - Tattoo Ideas Art
Toro-hevitra tsara indrindra 24 Tattoo ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy
Ao amin'ny tontolo tonga lafatra, ny tatoazy foko dia tsy afaka ny ho solon-tena marina fotsiny amin'ny zavatra inoantsika. Na dia tsy miaina ao anatin'ny tontolo lavorary aza isika, ny fampiasana ny tatoazy foko dia lasa manambara izay tena inoanao. Ity no tantara izay ezahantsika maro ankehitriny.
Ny tato amin'ny foko dia mampiseho hery na herimpo handresena sakana. Ny dikan'ny #tribal dia avy amin'ny kolontsaina na toerana na eny an-toerana. Nanomboka tamin'ny andro fahiny ny sasany tamin'izy ireo tamin'ny alalan'ny tatoazy. Ny tato amin'ny foko dia ampiasaina hiresahana momba ny finoana ara-panahy na ara-pinoana. Izy io dia ampiasaina ho tarika na ho an'ny fiarovana. Nampiasaina ihany koa ny tantara milaza fa tsy misy olona afaka milaza afa-tsy ny foko izay avy amin'ny foko #tattoo. Tsy voatery mandroso lavitra ianao mba hampahafantarana ny hafa ny fomba fiainanao. Amin'ny alalan'ity tatoazy ity, mora kokoa aminao ny mitantara ny tantaranao tsy misy feo.
Ny tato-poko dia manana dikany marobe ary afaka midika ho tanteraka. Ny boribory eo amin'ny tatoazy dia miresaka momba ny fahalavorariana sy ny fifandanjana ary koa ny mandrakizay, rehefa mijery ny halaviran-dalana avy eny afovoan-tanàna mankany amin'ny toerana rehetra. Fivavahana maro no mampiasa izany mba hiteny zavatra maro ho an'ny mpino. Ny tatoazy dia mampiseho ny halemem-panahy, ny haja, ny hatsaram-panahy, ny tsy fivadihana, ny fahamarinan-toetra ary ny fahatsoram-po. Ny tatoazy dia ampiasaina ihany koa mba hiresahana momba ny herim-po, ny hery ary ny famokarana. Azo aseho amin'ny zavatra mahalana sy tsy manam-paharoa toy ny orita, koi trondro ary horita hitazona fiarovana, fanampiana ary herim-po.
1. Special Tattoo Techniques
2. Tapa-kevitra tato ho an'ny foko ho an'ny lehilahy tratra
3. Tati-patana ho an'ny lehilahy sy ny sandry
Nanomboka nampiasa tatoazy ara-poko ny lehilahy sy ny vehivavy mba hijery hafa. Ny #design ny tato-poko ao amin'ny tribonanao dia tsy misy afa-miseho afa-tsy rehefa soratana eo amin'ny vatanao.
4. Kely indrindra amin'ny tatoazy tatoazy
Ny adihevitra miaraka amin'ity tatoazy ara-batana mafana ity dia ny fahatsapanao ho mafana ho anao tsy ho tia. Rehefa vonona ny hanohy ny dingana manaraka izay ahafahanao mijery amin'ny zavakanto ny vatana, ity tatoazy ity dia ho anao.
5. Tolo-tsavily mahafatifaty foko ho an'ny lehilahy
6. Famolavolana tato ho an'ny tato ho an'ny totozy ho an'ny zazalahy
Ny antsasany dia mitady fomba hahazoana tatoazy izay mety hitondra fahasamihafana rehefa mahita ny olona ary ny tatoazy eo amin'ny soroka dia mety ho vahaolana.
7. Tetika tsotra ho an'ny foko ho an'ny lehilahy
8. Tattoo fanta-daza tato ho ato ho an'ny vehivavy
Tattooist iray mendrika dia afaka manampy anao hanao tatoazy mahatalanjona ny foko ho an'ireo vehivavy. Ny famolavolana dia zavatra tokony hifanakalozanao amin'ny tatoazy misy anao mba hahafahan'ny olona manana #idea amin'izay ilainao.
9. Tavy sy tratra tato ho an'ny lehilahy
Raha mahita tatoazy ara-poko izay tianao amin'ny olona ianao, manontania hoe iza no nanao izany. Jereo ny gazetiboky tatoazy sy ny tranonkala hahazoana valiny momba ny tatoazy izay afaka manampy anao hanao ilay sary.
10. Tati-kevitra momba ny tato-poko ho an'ny ankizivavy
Ny tato amin'ny foko tato ho ato dia afaka manampy anao hahazo izany vokatra tadiavinao izany amin'ny tatoazy. Raha vao nahita tatoazy ianao ary nahita ny fianarany, dia nanokana fotoana hafa hitsidihana azy ireo ary hijery ny fianarany sy ny portfolios. Azonao atao ny manintona anao amin'ny endrika tattoo ny tatoazy.
11. Tati-patana ho an'ny lehilahy
12. Tatoazy mahafatifaty foko amin'ny lehilahy tanana
13. Tattoo tato ho an'ny tribonaly ho an'ny lehilahy
14. Tapa-kevitra manokana ho an'ny ankizivavy ny tato ho an'ny tato
Ho zava-dehibe amin'ny lohahevitra voalohany, ireo vehivavy dia nanomboka naneho fitiavana ny tatoazy ara-poko izay azo alaina amin'ny feny feno. Mazava ho azy, azonao atao ny milaza fa ny tatoazy ara-piraisana eo amin'ny tovovavy dia mety ho firaisana ara-nofo ary ny fotoana dia mandalo fampahalalana tokony halefa.
15. Teti-bolon'ny legan'ny tato ho an'ny vehivavy
16. Tattoo tatoazy ho an'ny vehivavy
17. Tolo-tànana mavomavo tato ho an'ny lehilahy
Fandaharam-potoana, ambaratonga, ary renirano, no tena manan-danja raha ny tato amin'ny foko. Afaka mifandamina amin'ny fomba toy izany ny tatoazy lehibe foko mba hahafahan'ny olona hahatakatra ny zavatra lazainy sy izay tianao hotanterahina amin'izany.
18. Lovam-poko mahafatifaty tatto tatto hevitra ho an'ny ankizilahy
Ataovy an-tsaina fa maro ireo tati-bao avy amin'ny foko tatoazy ankoatra ireo izay asehontsika. Ny tattoos foko dia voasarika amin'ny fomba isan-karazany izay antony tokony hahatonga anao manokana.
19. Kely fohy sy tebiteby ho an'ny tetiady ho an'ny lehilahy
20. Tattoo tatoazy ho an'ny vehivavy
21. Tapa-tombo-tsavily ho an'ny lehilahy
22. Famolavolana tapa-tenda ho an'ny foko tattoo ho an'ny vehivavy
23. Tattoo tato ho an'ny foko tattoo ho an'ny guys
24. Tato ho an'ny tato ho an'ny tato ho an'ny lehilahy soroka
Tatoazy ara-jeometrikaHeart Tattooscompass tattootattoos voronaraozy tatoazytattoosmehndi designtattoo octopusmozika tatoazyanjely tattoosmoon tattoosdiamondra tattootratra tatoazytattoo watercolortattoos ho an'ny lehilahytattoo eyeTattoo Feathertattoo cherry blossomtatoazy fokotatoazy ho an'ny zazavavyNy zodiaka dia mampiseho tatoazytattoos crosstattoos rahavavyfitiavana tatoazycat tattoostattoos mpivadynamana tattoos tsara indrindratattoos sleeverip tattoostanana tatoazytattoo infinityhenna tattooeagle tattoosmasoandro tatoazylion tattoostatoazy voninkazotattoos footscorpion tattookoi fish tattooAnkle Tattoosloto voninkazoelefanta tatoazytatoazy lolotattoos backtattoo ideastattoos armtattoos mahafatifatyarrow tattootato ho an'ny vatofantsikatattoos